DANJIROW INA AYAAD TAHAY? | Laashin iyo Hal-abuur
~ Abwaan Xuseen Aw Faarax Dubbad,
QABIIL JIRA ba, aniga ahaantay, sida aan rumays nahay, waxa iila wada wanaagsan midka—ayan sheegan xataa cid haybteeda—aan la aqoon. Kuu ka dhashay beel san amaba beel xun; Soomaaliga na waxa loogu kalsooni badnaan: xilkaska aan iskula weynaan—qofka aan isxijin, qofka aan ku faanin, qofka aan magac ka dhigan, qofka aan Xildhibaan ku noqon—magaciisa mooyaane magac qabiil. Tolkayow, muraayaddii na, waa taas kaa jabtay e; war bal orod, oo isku soo fiiri foolka Danjirehii Nayroobi.
Alkoliistehii, kiiyoo durba billaabay, jeegoxiir lahaa jidgees iyo taaloog ( joof ) dheer, in uu shanfarood iyo calaacal ku kala feero; isaga oo la moodo se wejigaygii yaabbanaa, muraayad oo kale, in uu iskugu eegayo, ayaa warkaygii dhexda ku dhuftay. Aabtirsiino ‘reer-hebel-hebel’ ah, asii aniga, berigeedii, si uun iila diimoonayd ayuu igu afjuxuunsaday, “Cali. Diridaari. Istallaa.”
NAYROOBI Janno ma ahayn. Show Cali na, Ibn Aadam ayuu ba iska ahaa. Ma cid moog ayaa jirta se? Innaga oo idil, adduunyada dhibteeda iyo wareerkeedaba, waxa aan u eersannaa ba: sow cunistii Aadam cunay geedkii la faray in hoobaantiisa uu ka cagganaado, maaha? Berigeedii, aqoondarro awgeed, waxa i seeganayd; mar kastana aan illowsanaan jiray; Cali in balwada [ caraqa ] uu iska dayn karay, kana tawbadkeeni karay. Haddii ay taas dhici lahayd na, sow lagama yaabeen in ay uga dhignaan kari lahayd naallo adduun; aakhirada na ay geyn lahayd,—ama isaga [ Cali ] ay dib ugu celin lahayd ba: “Degaankii” Abkow Aadam iyo Abooto Xaawo laga soo eryi jiray—dhexdeeda Janno udgoon. Hohey, Nayroobi se Naar ahaydaa.
ADIGA miyaa ogaan karay, aniga iyo Cali, in aan Nayroobi ku wada kulannay; ninka liitay na—taageerada ( dhaafiyeha ) u baahnaa na — in aan anigu ahaa? Walaalkay, gacaltooyadiisii weyneyd, walle anigu goorna ba, mugga quraarad xun kuma dhex miiso. Tolnimada qabyaalad xun awgeed na, alleylehe, jeerna isaga uma naco. Ilaahay ayaan na uga baryayaa in Cali uu gacan midig ka siiyo dhaafiye lagu galo Jannooyinka carfoon.
QABIIL, horta, hadmaad aniga tol ii noqon? Maxaadse rabi lahayd in aan adiga kuu ahaado: Ma Dagaalooge aan kuu naxariisan? Ma Dabadhilif ay gaalo ku qaraabato? Ma Baarlamaan kusheeg, 4.5 lagu soo xulo? Ma Barfasoor dhaandhaan ah? Ma Wasiirro xeebaha kaa dhaxalwareejiya? Ma askari caasi ah? Ma Sheekh hoobiye kugu gunaanada? Ma Qaxooti gurilaawe (dallaawe) ah? Ma Bulshada dhiigmiiradka Caalamka? Haddii aan anigu ahaan lahaa Danjireha ( afhayeenka ) Shacabka Soomaaliyeed, weydiimaha kore, dhammaantood, waxa aan kaga warcelin lahaa, “Maya!” Waryaa! haddee mar uun wax iga maqal. Waa ku kaas maanta na! Nayroobi ayaad ku dhex lunsan tahay: adiga oo marqaansan, adiga oo shalaboow fiiqsan, iyo adiga oo welibana jaahilnimo ay ku sii dheer tahay. Ilaahay, adiga, qabiilkayow, ha ii kaa soo hanuunsho uun. Walle, adiga oo fiiro yeesha maahee, lagama yaabo in aad ku hagaagtid barbarka ay kaa jirto Qibladii Islaamka; isla Kacbadii ina Diridaari Istallaa, Danjirehaygii Nayroobi—misana ogaan karay, aqoonsan jiray, soo booqan jiray—uu abbaarteeda na u jeesan jiray. Adigu na, qarankaygii, dadkaygii, ayaad Muxammaddiyadii ba ka jahawareerin.
Aniga ayaan mindhaa adiga weli aad ku baran e; bal ii soo sheeg qabiilkaygiiyow, gacalkaygiiyow, tolkee camal ayaad aniga ii ahaan? Kolley adigu ma ogid, hadi na maysid qabkayga e: weligaa ba se ogsoonow! In aan adiga kuu ahaan, cidna.
● Qormo: “Danjirow Ina Ayaad Tahay”
● Faafin: Wayeel | Lamtoka (Arbaco), Agoosto 4, 2009